Tag: xiriiriye | Bogga 2 ee 2 | Martech Zone
Isniin, Janaayo 11, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Taulbee Jackson
Maxay wadaagaan Washington Post, BBC News, iyo New York Times? Waxay kobcinayaan soo bandhigida waxyaabaha ku saabsan isku xirnaanta boggooda internetka, iyagoo adeegsanaya aalad loo yaqaan Apture. Halkii laga heli lahaa isku xirka qoraalka fudud, xiriiriyeyaasha Apture waxay kicinayaan daaqad pop-up ah oo jiirka ka badan oo soo bandhigi kara waxyaabo badan oo macno ahaan la xiriira.
Khamiista, Noofembar 5, 2009 Isniintii, September 21, 2015 Adam Yar
5 ″ /> Heerka dahabiga ah ee Google ee ah in degelku si fiican uqoran yahay iyo inkale wuxuu sii wadaa inuu isbeddelo waqti kadib, laakiin in muddo ah habka ugu wanaagsan ayaa isbadal la’aan… backlinks khuseeya laga soo qaatay goobo sharci ah. Bogga Raadinta Mashiinka Raadinta iyo waxyaabo badan oo aad u wanaagsan ayaa laga yaabaa in boggaaga lagu muujiyo ereyo gaar ah oo muhiim ah, laakiin backlinks tayo leh ayaa kor u qaadi doona darajadiisa. Maaddaama backlinks ay noqdeen badeecad la yaqaan, khiyaanooyin iyo adeegyo badan oo isku xira ayaa sii socda
Jimco, Juun 4, 2008 Jimco, Juun 4, 2008 Douglas Karr
Telefishanku badanaa gurigayaga ayuu ka daaran yahay, laakiin inta badan waa buuqa asalka. Haddii aan daawado telefishanka, badanaa waa Channel-ka Discovery Channel. Maanta waa maalin-shaqo, markaa dhowr jeer ayaan ku meeraystay kanaallada. Mudo kadib, waxaan kaliya kireysanay filim. Waa kuwan 3 sababood: HeadOn Is-qoritaan kadib markaad aragto ganacsigooda 47 jeer. Billy Mays Waxa kaliya
Dukaanka Kombuyuutarku wuxuu leeyahay maqaal ku saabsan Dhiirigelinta Bloggaaga. Maqaalku wuxuu leeyahay talooyin waxtar leh laakiin uma maleynayo inay si sax ah u heleen mudnaantooda mana aysan daboolin dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah. Waxaan si isdaba joog ah ugu sii kordhayay taraafikada barteyda labadii bilood ee la soo dhaafay. Waxaan si taxaddar leh u cabiray aqristayaashayda, ilaha ay ka helaan akhristayaashayda, oo aan ula jaanqaadi jiray si waafaqsan. Waxaan bartay tan tan iyo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Waa kuwan Tobankayga ugu sarreeya: Ha yeelin